Onye na-edeba aha gị ọ nwere ike belata gị? | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 1, 2007 Thursday, January 5, 2017 Douglas Karr
Na nnukwu todo banyere nkagbu GoDaddy nke ndị ahịa ya (onye nwere mgbasa ozi nke ya ugbu a: NoDaddy.com), ekpebiri m ileba anya na ndị ọzọ na-edebanye aha, gụnyere nke m, iji hụ ma ha nwere ike ịdọrọ plọg ahụ dịka GoDaddy mere. Ga-eju anya, naanị ụfọdụ ndị na-edebanye aha nwere Usoro Ọrụ nke setịpụrụ ụfọdụ ihe siri ike chọrọ megide Nkagbu:
16.2 Ngalaba nkwusioru, akagbu ma ọ bụ bufee. Kwenyere ma kwenye na ndebanye aha ngalaba gị nwere ike ịkwụsị nkwusio, kagbuo ma ọ bụ nyefee (ịkagbu ma ọ bụ nyefee otu akpọrọ, "Nkagbu") (a) iji dozie mmejọ site na Dotster, Inc. aha ma ọ bụ (b) maka mkpebi nke esemokwu banyere ngalaba ahụ dabere na usoro ma ọ bụ usoro ICANN. Also kwetakwara na Dotster, Inc. ga-enwe ikike n'onwe ya iji kwụsịtụ, kagbuo, nyefee ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ gbanwee ndebanye aha na ụbọchị asaa (7) kalenda tupu oge amachara ya na mgbe oge Dotster, Inc. natara. usoro ziri ezi nke enyere site na ụlọ ikpe nke ikike ikike, ma ọ bụ ikpe mkpezi, na-achọ nkwusioru, akagbuo, nyefee ma ọ bụ mgbanwe nke ngalaba aha.
NKWASỊTA: Abụ m onye mmekọ ahala n'akwụkwọ nke Dotster mana m bụkwa onye na-akwado ọrụ ha. Enyochare m ọpụrụiche ha ugbu a wee hụ nke a n'abalị a nke m nwere ike ịgbatị ndị na - agụ akwụkwọ m:
Nyefee ngalaba gị na Dotster ma kwụọ ụgwọ naanị $ 8.99 iji mee ka ngalaba gị dị ọhụrụ maka afọ ọzọ. pịa ebe a
B INGHC gụnyere ọrụ: enweghị mmachi, ndị na-esonụ na-agunyeghi na Ọrụ: Anyị enweghị ike ma ghara ịlele ịhụ ma ngalaba aha (s) ị họrọ, ma ọ bụ ojiji ị na-eme nke ngalaba aha (s), ma ọ bụ ndị ọzọ nke Ọrụ (s), na-emebi ikike iwu nke ndị ọzọ. Ọ bụ ọrụ gị ịmara ma aha ngalaba (s) ị họrọ ma ọ bụ jiri ikike imebi iwu nke ndị ọzọ. Anyị nwere ike a nyere iwu site a ikpe kagbuo, gbanwee, ma ọ bụ nyefee gị na ngalaba aha; ọ bụ ọrụ gị iji depụta ozi kọntaktị ziri ezi na njikọ yana akaụntụ gị yana ịkpọtụrụ ndị gbara akwụkwọ, ndị nwere ike ịgba akwụkwọ, yana ndị gọọmentị. Ọ bụghị ọrụ dịịrị anyị izigara gị iwu ụlọ ikpe ma ọ bụ nkwukọrịta ndị ọzọ. Anyị ga-agbaso iwu ụlọ ikpe belụsọ na ị kpọtụrụ anyị ka anyị zọọ iwu ahụ.
Kwenyere ma kwenye na Register.com nwere ike kwụsịtụ, kagbuo, nyefee ma ọ bụ gbanwee ojiji nke Ọrụ ndị ahụ n'oge ọ bụla, maka ihe ọ bụla, na Register.com naanị ezi uche na-enweghị ọkwa gị.
10. Mmachi Ibu. Na mgbakwunye na njedebe ndị ọzọ nke iwu dị na nke a, ị kwenyere na Ngwọta Network agaghị enwe ọrụ n'ụdị ọ bụla maka ọnwụ ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla sitere na nhazi nke ndebanye ndebanye aha site na .TW Registry tinyere, na-enweghị njedebe, ikike gị ma ọ bụ enweghi ike inweta otu ngalaba aha. Ngwọta Ntanetị enweghị ụgwọ maka arịrịọ ọ bụla maka ndebanye aha ma ọ bụ ịjụ aha ngalaba, nkwụsịtụ, nkagbu, nhichapụ, nkwụsị ma ọ bụ nyefe n'ihi usoro, iwu ma ọ bụ iwu nke .TW Registry, TWNIC, ma ọ bụ n'ihi omume, omenala ma ọ bụ ajọ mbunobi nke ụlọ ikpe nke iwu ma ọ bụ esemokwu na-edozi ndị mkpezi ikpe. Anyị anaghị akwụ ụgwọ maka nkwupụta ọ bụla, mmebi ma ọ bụ mmerụ ọ bụla na-esite na nkwụsị ọrụ ndị enyere site na .TW Registry maka ebumnuche ọ bụla, gụnyere ma ọ bụghị naanị na njedebe nke ikike ndebanye aha .TW, ma ọ bụ enweghị ego.
5.3 Nchupu site na AT&T Yahoo!
AT&T Yahoo! nwere ike ịkwụsị Usoro ndị a n'oge ọ bụla na ọkwa gị. N'agbanyeghị ihe ọ bụla na nke a, AT&T Yahoo! nwekwara ike, mana enweghị ọrụ ọ bụla, kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị Ọrụ gị ozugbo, kwụsị ịnweta na paswọọdụ gị, wepu Ọrụ gị na AT&T Yahoo! sava, ma ọ bụ wepu ọdịnaya ọ bụla n'ime Ọrụ ahụ, ọ bụrụ na AT&T Yahoo! na-ekwubi, na naanị ezi uche ya, na ((a) emebiwo, mebie, ma ọ bụ mee ihe na-ekwekọghị na leta ma ọ bụ mmụọ nke Usoro ndị a, gụnyere AT&T Yahoo! Iwu ma ọ bụ iwu ọ bụla nwere ike ịdị; (b) enyela ozi ugha dika akuku nke ozi Akaụntụ gi; (c) na-etinye aka na aghụghọ ma ọ bụ na-ezighi ezi ma ọ bụ na-ere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na-emebi iwu ma ọ bụ na-emerụ ahụ; ma ọ bụ (d) na-eme ihe ma ọ bụ ire ahịa nke nwere ike imebi ikike ma ọ bụ aha nke AT&T Yahoo! ma ọ bụ ndị ọzọ (nke ọ bụla "nkwụsị maka ihe kpatara ya"). Nkwụsị ọ bụla maka Ihe site na AT&T Yahoo! ga-adị ire ozugbo, ị kwenyesiri ike na will gaghị enwe ohere ịgwọ. Ọ bụrụ na gị AT&T Yahoo! A kwụsịrị ID maka ihe ọ bụla, Usoro ndị a na ohere ịnweta Ọrụ ahụ ga-akwụsị. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị debanyere aha ngalaba ọhụrụ ọhụrụ na njikọ Ọrụ gị, yana AT&T Yahoo! kwụsị Ọrụ gị n'ihi nkwụsị maka ihe kpatara ya, wee AT&T Yahoo! nwere ikike ịrịọ onye na-eweta ngalaba aha iji wepu aha ngalaba ahụ na ngalaba aha ndekọ aha na / ma ọ bụ nyefee aha ngalaba ahụ n'aka to gaa AT&T Yahoo! Kwenyere na ebe AT&T Yahoo! na-enyefe ụdị aha ngalaba ahụ na AT&T Yahoo! n'okpuru Nkebi 5.3 a, AT&T Yahoo! ga - ejide ikike niile nke onye nwe ngalaba aha edebanyere na ngalaba aha ahụ, gụnyere ikike ire aha ngalaba ahụ na ndị ọzọ (ebe nke a bụ ikike nke as dịka onye ndebanye aha mbụ na ngalaba aha dị mkpa) .
6.5 Anyị debere ikike, naanị iji aka anyị, kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị ịnweta gị weebụsaịtị na Ọrụ Ndị metụtara ya ma ọ bụ akụkụ ọ bụla, n'oge ọ bụla, na-enweghị ọkwa. Anyị ga-akwụsị maka mmebi ọ bụla nke usoro ọrụ anyị ma ọ bụ maka ọrụ ọ bụla nke mejupụtara iwu na-akwadoghị ma ọ bụ nke amachibidoro dị ka akọwara ebe a.
Ọ bụrụ n ’ị zụrụ Ọrụ, Go Daddy enweghị ọrụ inyocha etu i si eji Ọrụ ahụ. Go papa m nwere ikike inyocha ojiji nke Ọrụ ndị a na ịkagbu ọrụ ndị a ka ọ dị. Go Papa nwere ikike ịkwụsị access nweta gị na Ọrụ n'oge ọ bụla, na-enweghị ọkwa, maka ebumnuche ọ bụla.
Abụghị m ọka iwu, yabụ anaghị m adụ onye ọ bụla ọdụ na onye ha kwesịrị ma ọ bụ na ọ gaghị edebanye aha ha na ya. Ekwenyesiri m ike na iwu iwu m hụrụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị mma na odo adịghị mma. Usoro ọrụ na-ekwupụta na ha nwere ike ịhapụ ọrụ gị na-enweghị ọkwa ọ bụla, na obere ọkwa little ma ọ bụ ha nwedịrị ike na- aha ngalaba gị na-atụ m egwu he !!!
IHE: Inyocha Google okwu ngalaba, ọ na-egosi na ha na-eji GoDaddy ma ọ bụ eNom… mana enweghị m ike ịkọ nke ma ọ bụ otu. Ngosipụta Zuru Ezu: Emepụtara m akara ngosi NoDaddy. Enwere m Mgbakwunye ahịa na Commission Junction ma nye m ikike ịre ahịa mmekọ maka Dotster na GoDaddy. N'ezie, ị ga-ahụ otu n'ime mgbasa ozi GoDaddy na ibe a! Enweghị m ịhọrọ ya.
Tags: at & tdomainonye na-edeba aha ngalabantụpọenomgodaddymydomainmydomain.comngbasa ozi netwọdinodaddydebanye ahayahoo
Jun 11, 2007 na 11: 12 PM
Enweghị nsogbu na ngalaba m na-edeba aha GoDaddy, ma.